Marcelo Oo Farriin Qalbi Ruxle Ku Macsalaameeyey Cristiano Ronaldo – Laacib.net
Maalmo kaddib markii uu Cristiano Ronaldo ka tagay Real Madrid, Marcelo ayaa macsalaameeyey saaxiibkiis oo haray koox wadaagga u ahaayeen.
Dadabka biddix ee Brazil waxa uu farriin ku muujiyey xiriirkii saaxiibtinimo ee ka dhexeeyey.
“Yaa dhahi karay, Cris! Waa waqtigii aad tagi lahayd mar dhaw….
“Waxaan ku dharanayaa ma sawiran in maalintaas imaan doonto! Laakiin dunidan wax waligeed ah ma jirto, waxaan rejeynayaa in aad aad ugu faraxsan tahay kooxdaada cusub.
“Ku dhawaad 10 sano ayaan dhinacaaga joogay, 10 sano oo farxad badan, kubadd qurux badan, guulo, guuldarroyin iyo waqtiyo qurux badnaa! Wax badan ayaan kaa bartay, ka go’naashahaagii waa wixii iigu yaabka badnaa ee aan ku arko ciyaaryahan.
“Wax walba waa waajib in ay kuu wacan yihiin adiga iyo qoyskaaga!
“Waxaan u xiisi doonaa hadalkeenii kulanka kahor, marka aad natiijooyinka saxdo iyo markii fiinaaleyaasha kahor aad nagu dhiirigalin jirtay khibradaaddii cajiibka ahayd iyo jaceylkii aad siin jirtay da’yarta!
“Waan ku faanaa in aan kula ciyaaray, ma aha in aad tahay kan dunida ugu fiican laakiin qofka aad tahay.
“Marka aan dhammeeyo dheesha,waxaan fariisan doonaa maqaayaddda oo koob khamri ah ayaa qabsan doonaa, si aan u wariyo xoogaa sheekooyinkeena ah aniga oo muujin doona sawiro.
“Waxaan ku leeyahay macsalaama,#M12.”
Raisul Wasaaraha UK Theresa May Oo Sheegtay Waxa Ay U Sameyn Doonto Xulka England Ee Ku Soo Haray Afar Dhamaadka Koobka Aduunka